I-Projectservice - Chengdu Ruibo Technology Co., Ltd.
Iphrojekthi kanye namalungu ethimba losekelo lobuchwepheshe anesipiliyoni esingaphezu kweminyaka emihlanu kanye nendawo yendiza ephelele engaphezu kwamakhilomitha-skwele angu-1500. Ukuze kuqinisekiswe ikhwalithi yemiphumela, sihlomise izisebenzi zephrojekthi ngayinye ngekhamera ye-oblique yobuchwepheshe obuphezulu ekhiqizwe yi-Rainpoo. Njengamanje, ithimba lethu lephrojekthi lenza izinsizakalo ezifana nendiza yezithombe ezitshekile, ukucutshungulwa kwedatha yemodeli ye-3D, kanye nokuguqula imodeli ye-3D.
Uma unamaphrojekthi afana ne-Survey/GIS/Smart City/Construction/MiningTourism/ukuvikelwa kwezakhiwo zasendulo/umyalo wesimo esiphuthumayo futhi udinga ukwenza imisebenzi yokumodela ye-3D, kodwa ungenawo amathuluzi noma amadoda anolwazi, singakusiza uqedele le misebenzi intengo enengqondo.
Xhumana nathi >
Sineqoqo lekhompyutha elinamakhompuyutha angaphezu kwekhulu futhi lingacubungula angaphezu kuka-500,000 ngesikhathi.
Uma ungakwazi ukuphatha inani elikhulu kangaka ledatha yesithombe, ngesisekelo sokuqinisekisa ikhwalithi nokunemba kwemodeli ye-3D, singakusiza ngalokho kucutshungulwa kwedatha ngentengo efanelekile.
Inkampani yethu inomnyango wokusekela ubuchwepheshe bekhamera, owakhiwa onjiniyela bethu abanolwazi olunzulu lokusekela lobuchwepheshe. Ukwesekwa okumaphakathi kwamalungu kungaphezu kweminyaka emi-3. Ngemva kokulethwa kwekhamera, inkampani yethu izonikeza ikhasimende unjiniyela wosekelo lobuchwepheshe ukuze aqeqeshe ukusetshenziswa kwekhamera ukuze aqinisekise ukuthi opharetha bangasebenzisa ikhamera ngobuchule.
Ngakho-ke, uma unezinkinga ngokusetshenziswa kwekhamera, umnyango wosekelo lobuchwepheshe ungahlinzeka ngezinsizakalo. Ngaphezu kwalokho, ikhasimende ngalinye linomphathi wesevisi yekhasimende elilodwa kuya kwelinye. Uma unezidingo zesevisi yezobuchwepheshe, ungahlala uthintana nomphathi wesevisi yamakhasimende, sizokujabulela ukukusiza.
Ukwesekwa kokuthengisa kwangaphambili
Samukela isimemo somboniso emhlabeni wonke.Uma uthanda amakhamera ethu atshekile, ungangabazi ukusithinta ukuze uthole ithuba ledemo.
Sikholelwa ukuthi imikhiqizo emihle kakhulu kanye nabasebenzi abanolwazi bangahlinzeka ngezinsizakalo eziphelele kumakhasimende ethu.
Okuhlangenwe nakho komsebenzisi bekulokhu kugxilwe yi-Rainpoo. Ukuze iphendule ngokushesha ezidingweni zabasebenzisi, i-Rainpoo imise isethi yezinhlelo zangemuva kokuthengisa, izimo eziphuthumayo kanye ne-value-added ukuze ibhekane nezinkinga ezihlukahlukene ezingalindelekile futhi ihlangabezane nezidingo zabasebenzisi . Ithimba lochwepheshe lokunakekela amakhamera, ithimba losekelo lobuchwepheshe, ithimba lokuhlola amakhamera, ukuze kuqinisekiswe ikhwalithi ephezulu nezinga eliphezulu lekhamera ngayinye ekhiqizwe yithi. Kungumsebenzi waphakade we-Rainpoo ukuhlinzeka abasebenzisi ngemikhiqizo namasevisi angcono kakhulu.